Dangorayo iyo Hiigsiga Hormarka ee Sannadka 2017 – Radio Daljir
Dangorayo iyo Hiigsiga Hormarka ee Sannadka 2017
Maajo 13, 2017 1:34 b 0
Degmada Dangorayo oo 110 KM dhanka bari ka xigta magaalada Garoowe ee caasimada Dawladda Puntland ayaa waxaa sannadkan ka biloowday horumar la taaban karo, dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, isgaarsiinta, nadaafadda, iyo qurxinta bilicda magaalada. Hormarka Dangoroyo wuxuu tallaaboqaaday wixii ka dambeeyay sannadkii 2014.
Biloowga bishaan May, maamulka iyo shacabka degmadu waxa ay bilaabeen olole nadaafadeed iyo waliba dhiraynta deegaanka, dhinaca hareeraha wadada magaalada dhex marta iyo xaafadaha qaarkood.
Xoghayaha degmada Dangorayo, Cabdiqaadir Abshir Muuse, oo waraysi gaar ah siiyay Idaacadda Daljir ayaa nooga waramay hormarka ka socda degmada, asaga oo xusaya baahiyaha weli taagan, ha ahaato dhanka adeegyada caafimaadka, waxbarashada, kaabayaasha dhaqaalaha, IWM. Axmed Xuseen Cabdulqaadir (Axmed Sheekeeye ) oo ku sugan xarunta Daljir Garoowe ayuu u waramay.
Warka Fiidnimo iyo Khadar Cawl Ismaaciil (dhegayso)